Raikitra ny fifampitifirana teny Ilafy: jiolahy 4 mpanafika «cash-point» indray lavon’ny balan’ny polisy | NewsMada
Teo am-panomanana fanafihana teny Ilafy ireto jiolahy ireto no nitontonan’ny polisy tampoka, omaly. Tsy vitan’ny nanohitra fa namaly tamin’ny tifitra izy ireo. Nandray ny andraikiny ny polisy, ka lavo nandritra ny fifampitifirana ny efa-dahy, izay voalaza fa anisan’ny nanao ireny fanafihana “cash-point” teto an-drenivohitra ireny.
Jiolahy malaza mpanao fa­nafihana eto an-drenivohitra, lavon’ny balan’ny po­lisy, omaly tolakandro tokony ho tamin’ny 2 ora teny Isahafa Ilafy. Lehilahy iray, naman’ireo olon-dratsy kosa tafaporitsaka ary mbola karohina, ankehitriny.
Araka ny fantatra, tra-tehaky ny polisy, ny asabotsy hariva teo ny lehilahy iray naman’ireo olon-dratsy ka nanaovana fanadihadiana. Nambarany tamin’izany fa mikononkonona fanafihana mitam-basy to­kantrano iray eny Isahafa Ilafy ny namany miisa dimy lahy, omaly. Manoloana izany, nidina teny an-toerana ny polisy avy ao amin’ny kaomisaria Ava­radrano niaraka tamin’ny USI ary ny BC4. Hita teny ny moto iray fitondran’ireo jiolahy amin’ny asa ratsiny. Ni­tsoaka avy hatrany izy ireo vao nahatazana ny polisy. Tao anatin’izay, mbola nitifitra koa ireo jiolahy ary namaly izany ireo polisy. « Naharitra minitra maromaro ny fifampitifirana », raha ny fanazavan’ny polisim-pirenena, omaly. Vo­kany, lavo nandritra izany ny lehilahy miisa efatra. Tafapo­ritsaka tany anaty ala kosa ny namany iray hafa.
Tratra tamin’ireo maty ny basy miisa telo, nahitana basy poleta miisa roa, basy lava iray niampy antsy lava. Taori­an’ izay, naterina eny amin’ny tranom-patin’ny HJRA ny vata-mangatsiakan’ireo namoy ny ainy.
« Tafiditra ao anatin’ireo mpanao fanafihana eto an-drenivohitra ireo jiolahy lavo ireo. Isan’izany ny fanafihana “cash point” nisesisesy ireny toy ny teny Nanisana sy ny fa­nafihana teny Besarety koa », hoy ny polisim-pirenena. No­tohizany tamin’izany fa mitondra moto Scooter izy ireo rehefa hanafika. Antony nahatonga ny polisy nisava hatrany ireo moto mivezivezy eto an-drenivohitra izany.